Europe4Countries Tour
Tokyo - Kamarkura - Fuji - Kyoto
Bali Island Tour (Honeymoon Tour)
Lankawi Island Tour (Honeymoon Tour)
Brisbane – Gold Coast – Sydney – Melbourne
2980 $ ~ +++
Tokyo - Kamarkura - Fuji - Yokohama
Korea ဂျင်ဆင်း၊ ကင်မ်ချီ၊ တော့ပုကီခရီးစဉ်
1450 ~ ++
ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအချက်အခြာမြို့ စင်္ကာပူမှာ မိသားစုနဲ့အတူအပန်းဖြေကြမယ်
Merlion Park, Esplanade Theatre, Marina Bay Sands (Sky Park Observation Deck), Sentosa, Trick Eye Museum, Madame Tussauds Museum, Universal Studios, Wings of Time, Orchid Garden, Shopping @ Mustafa Centre, Peninsula Plaza, Singapore Parliament House, Chocolate Gallery, Flower Dome, Garden By The Bay, နှင့် ဈေးဝယ်ထွက်ရန် အားလပ်ချိန်များပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တည်းခိုရန် ဟိုတယ်များမှာ -3Stars,4Stars,5Stars
အစားအသောက် - နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ (Set Menu or Buffet)
၀န်ဆောင်မှု - ကျွမ်းကျင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်လမ်းညွှန်
၁၅ ဦး အဖွဲ့/ ၂၀ ဦး အဖွဲ့/ ၃၀ ဦး အဖွဲ့
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ မိသားစုများအတွက်လည်း သီးသန့်ခရီးစဉ်များလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
အမှတ် 118 (A), ဓနအောင်လမ်း၊ သုဝဏ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁ ၂၃၃၁၃၅၉၊ ၀၁ ၂၃၃၁၅၉၄
ဥရောပက အနုပညာလက်ရာများနှင့် ရှုခင်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြရအောင်
အီတလီနိုင်ငံ Rome မြို့တွင် St. Peter Square နှင့် St. Peter Basilica, Colosseum, Roman Forum, Trevi Fountain, Piazza De Spagna, The Pantheon, Palazzo del Quirinale.
အီတလီနိုင်ငံ Venice မြို့ရှိ Academia တံတား၊ St. Marco Square နှင့် St. Marco Church, Murano Glass Factory, Doge's Palace, Bridge of Sighs.
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Zurich မြို့ရှိ Limmat River Historic Site, Lake Zurich, Bahnhofstrasse St., Mt. Titlis, Engelberg Town, Lucerene Town, Thorwalden's Lion Monument, Old Town, Covered Chapel Bridge, Jesuit Church, Schaffhausen Town, Lake Constance.
ဂျာမဏီနိုင်ငံ Munich မြို့ရှိ Englischer Garten (Beer Garden), Munich Old Town, Marienplatz Central Square, Palace of Nymphenburg, Olympic Tower, Leopold Street, Artist Quarter.
ဂျာမဏီနိုင်ငံ Berlin မြို့တွင် Charlottenburg Palace, Kurfurstendamm Road, Kaiser William Memorial Church, Memorial of Murdured Jews, Parliament House, Brandenburg Gate, Berlin Wall, Hitler's Bunker.
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့တွင် Arc De Triomphe, Lovure Museum, Notre Dame Cathedral, Champs Elysees Avenue, Eiffel Tower, ဈေးဝယ်ထွက်ရန်နှင့် အနားယူအပန်းဖြေရန် အားလပ်ချိန် အစရှိသည်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သာယာလှပတဲ့ ဗီယက်နမ်ရဲ့ ရှုမငြီးဖွယ် သဘာဝအလှအပတွေကို ခံစားရင်း သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုများနဲ့အတူ လည်ပတ်နိုင်မယ့် ခရီးစဉ်။
အတန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုတွေပေးရင်း PSL မှ ကျွမ်းကျင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူ လည်ပတ်ရမှာဖြစ်လို့ ဘာသာစကားအခက်အခဲအတွက်လည်း မပူရတော့ဘူးပေါ့။
နောက်ဆုံးညမှာလည်း အမျိုးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်တဲ့ ဘူဖေးညစာနဲ့ ဧည့်ခံဦးမှာ
၃ညအိပ် ၄ရက်ခရီးစဉ်အတွင်း သွားရောက်လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာ
ကမ္ဘာ့သမိုင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် လှပသော နာမည်ကျော် ဟလောင်းကမ်းခြေနှင့် ကျွန်းငယ်များ၊ Thein Cung သဘာဝ ကျောက်စက်ပန်းဆွဲဂူ နှင့် အနီးဝန်းကျင်၊ စုံလင်စွာ ခင်းကျင်းပြသထားသော ဟလောင်းမြို့ညဈေး၊ ဟလောင်းမှအပြန် ဈေးဝယ်ရန် AEON Shopping Mall ၊ ဟနွိုင်းမြို့ရှိ အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များတည်ရှိရာ Old Quarter ၊ လှပသော Hoan Kiem Lake နှင့် Huc Bridge ၊ Pen Tower နှင့် Ngoc Son Temple ၊ ဧည့်သည်တော်များအတွက် အထူးအမှတ်တရအနေဖြင့် ဗီယက်နမ်ရိုးရာ ရေပေါ်ရုပ်သေးရုပ်ပြပွဲ၊ Ba Dinh ပြည်သူ့ရင်ပြင်၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်း၏ နေအိမ်နှင့် ဟိုချီမင်း ပြတိုက်၊ တိုင်တစ်လုံးတည်းဖြင့် ထူးခြားဆန်းပြားစွာဆောက်လုပ်ထားသော One Pillar Pagoda နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး တော်ဝင်စာပေတက္ကသိုလ် အစရှိသည့် နေရာများသို့ စုံလင်စွာဖြင့် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်နော်...
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ အကောင်းဆုံး အတန်ဆုံးဖြစ်အောင် PSL မှ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
နံနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာ ပါဝင်ပြီးဖြစ်လို့ ဘာမှထပ်ကုန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ (ဗီယက်နမ်က လက်ဆောင်လေးတွေ အရမ်းလှလို့ စွတ်ဝယ်ရင်တော့ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်နော်)
ဟလောင်းကမ်းခြေမှာလှေနဲ့ သွားတဲ့နေ့မှာ Seafood နေ့လည်စာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံဦးမှာ
နောက်ဆုံးနေ့ညမှာကျွေးမယ့် အမျိုးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်တဲ့ ဘူဖေးညစာနဲ့စားပြီးရင် အိမ်ကအမျိုးတွေရဲ့နာမည် မနည်းပြန်စဉ်းစားရမယ်နော်
ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် ၀င်ကြေးတွေလည်းပါဝင်ပြီးဖြစ်လို့ တစ်ကယ်ကို ဘာမှထပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်
ကျွမ်းကျင်အဆင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြော နိုင်ငံခြားသားဧည့်လမ်းညွှန်အပြင် တစ်ကယ်ကို စိတ်ရှည်ပြီး အတွေ့အကြုံပြည့်ဝတဲ့ PSL ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ enjoy လုပ်နိုင်ဦးမှာ
အယောက် ၂၀ ခရီးစဉ်အတွက် လေအေးပေးစက်တပ် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကို အယောက် ၃၀ စီး ခရီးသည်တင်ယာဉ်နဲ့သုံးထားပေးလို့ ချောင်ချောင်ချိချိ သက်တောင့်သက်သာလည်းရှိမှာအမှန်ပဲနော်
ထွက်ခွာမည့်ရက် - ဂျူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၈ မှ ဂျူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၈ အထိ
တည်းခိုရန် ဟိုတယ်များမှာ -3Stars Hotel (နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနှုန်းဖြင့်)
လေယာဉ်လက်မှတ် - ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (Vietnam Airlines ဖြင့်)
အစားအသောက် - နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (Set Menu + အမျိုးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်သော ဘူဖေးညစာ တစ်နပ်)
၀န်ဆောင်မှု - ကျွမ်းကျင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်လမ်းညွှန်။
သြစတေးလျှမှာရှိတဲ့ အထင်ကရမြို့တွေကိုလည်ပတ်ရင်း လှပတဲ့ သဘာဝအလှအပတွေကို ကြည့်ရှုခံစားကြရအောင်
ဆစ်ဒနီမြို့တွင် Darling Harbor, Aquarium, Wildlife Park, Sydney Tower, Blue Mountain, Jenolan Caves, Port Stephen, Sydney Opera House, The Rock, Bondi Beach နဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောလည်း စီးကြမယ်။
Gold Coast ကို လေယာဉ်နဲ့ပျံသန်းပြီးနောက် Movie World တွင် တစ်ရက်၊ Sea World တွင် တစ်ရက် အနားယူအပန်းဖြေကြမယ်။
Melbourne ရှိ Phillip Island, Churchill Island, San Romeo Fishing Village နဲ့ Great Ocean Road တို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး Puffing Billy မီးရထား လမ်းတစ်လျှောက် သဘာဝအလှအပများကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခမာလူမျိုးတို့၏ ကမ္ဘာ့သမိုင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ကျောင်းတော်များသို့ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Siem Reap မြို့ရှိ Angkor Night Market, Angkor Wat ကျောင်းတော်, Angkor Thom ကျောင်းတော်, Bayon Temple, Phimean Akas Temples, The Leper King Terrace & Elephant Terrace, Ta Phrom Temple, Tonle Sap Lake စသည့်နေရာများသို့ သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
အနုရတ္ထပူရမြို့တွင် မဟာဗောဓိပင်၊ Brazen Palace၊ ရုဝါနဝေလ္လိစယစေတီတော် တို့အား သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပေါလုဏ္ဏရုဝမြို့တွင် ရှေးဟောင်းမြို့တော်၏ တော်ဝင်နန်းတော်ရာနေရာ၊ အတ္ထရာရာမ ရှေးဟောင်းကျောက်ဆင်းတုတော်များနှင့် နန်းရင်ပြင်နေရာ၊ ကြာပန်းပုံစံထွင်းထုတည်ဆောက်ထားသည့် ရေချိုးဆိပ်၊ Parakumbahu King's Statue၊ Parakarama Samudraya ရေကန်၊ Lankathilaka Vihara စေတီတော်၊ Polonnaruwa Vatadage စေတီ၊ နိစ္စက္ကမလ္လာမင်း၏ကျောက်စာတော်၊ ယခင် စွယ်တော်မြတ်အား ဌာပနာထားရှိရာစေတီတော်ဟောင်းနေရာ၊ ဆီဂိရိယ ကျောက်ခံတပ်နှင့် ကျောက်တောင်၊ စသည့်နေရာများသို့ သွားရောက်လေ့လာဖူးမျှော်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် သမ္ဘူလကျောက်စေတီသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပြီးနောက် ကန်ဒီစွယ်တော်ဘုရားပွဲတွင် စွယ်တော်မြတ်အားဖူးမျှော်ပူဇော်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထွက်ခွာမည့်ရက် - သြဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၈ မှ သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၈ အထိ
တည်းခိုရန် ဟိုတယ်များမှာ -3Stars,4Stars (၂ ယောက်တစ်ခန်းနှုန်းဖြင့်)
လေယာဉ်လက်မှတ် - ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အစားအသောက် - နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
စည်းကမ်းရှိပြီး တိုးတက်ခေတ်မှီတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အားလပ်ရက်မှာ အလည်သွားကြမယ်
တိုကျိုမြို့တွင် အုရှိကု ရပ်တော်မူဘုရား၊ အဆကုဆ ကျောင်းတော်၊ တိုကျို Sky Tree တာဝါ၊ ဂျပန်ဘုရင့်နန်းတော်အ၀င်ဝ၊ တိုကျိုတာဝါ၊ အခိဟဘာရ၊ ဟာရဂျုကု၊ ရှင်းဂျုကု၊ အိခဲဘုခုရို၊ ရှိဘုယ၊ တိုကျို Disneyland အစရှိသည့် နေရာများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။
ကမာကူရ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်မြတ်၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ဖူဂျီတောင် 5th Station၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော ဂိုတမ်းဘ ကမ္ဘာအေးဘုရား၊ ဟခိုးနဲ၊ ဂိုတမ်းဘ Shopping Center အစရှိသည့်နေရာများသို့လည်း စုံလင်စွာပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျိုတိုမြို့တွင် ရွှေကျောင်းတော် ကင်းကခုဂျိ၊ ခိယိုမိဇုကျောင်းတော်
အိုဆာကာမြို့တွင် အိုဆာကာရဲတိုက်၊ ရျင်းဆိုင်းဘရှိ၊ ကိုဘေး၊ မာရိကန် ပန်းခြံ၊ တရုတ်တန်း၊ ဟခုစုရု ဆာကေးဆိုင်
အစရှိသည့်နေရာများသို့ စုံလင်စွာ လိုက်လံပို့ဆောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လှပသော ပတ္တရားကမ်းခြေနှင့် ဘန်ကောက်ရှိ မြဘုရား သို့ မိသားစုနဲ့အတူ သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြရအောင်
Sriracha Tiger Zoo, Nong Nooch Village, ပတ္တရားကမ်းခြေ၊ ဘန်ကောက် ဘုရင့်နန်းတော်၊ မြဘုရား၊ Wat Pho လျှောင်းတော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတေ်ာမြတ်၊ Ocean World ငါးပြတိုက်၊ ဈေးဝယ်ထွက်ရန် MBK Shopping Center အစရှိသည့်နေရာများသို့ စုံလင်စွာပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏မြို့တော် ဟိုချီမင်းသို့ မိသားစုနှင့်အတူ သွားရောက်လည်ပတ်ကြမယ်
ဟိုချီမင်းမြို့ ဆိုင်ဂွန်မြစ်ပေါ်ရှိ နှစ်ထပ်သင်္ဘောကြီးတွင် ညစာသုံးဆောင်ရင်း အကပဒေသာများကို ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါမည်။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်း အသုံးပြုခဲ့သော Cu Chi Tunnels, French Old Quarter, Notre Dame Cathedral, Central Post Office, War Memorial Museum အစရှိသည့်နေရာများသို့သွားရောက်လေ့လာနိုင်ရန် လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြေမြတ်မဟာဗုဒ္ဓဂါယာသို့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များအား အောက်မေ့ဆင်ခြင်ရင်း သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြရအောင်
ဂါယာတွင် မဟာဗောဓိစေတီတော်၊ သတ္တသတ္တာဟ ၇ ဌာန၊ မဟာဗောဓိပင်၊ မြတ်စွာဘုရား ဒုက္ကရ စရိယ ကျင့်တော်မူခဲ့သောနေရာ၊ သုဇာတာ နို့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းသောနေရာ နှင့် နေအိမ်၊ ရသေ့ညီနောင်တို့အား ချေချွတ်တော်မူသည့်နေရာ၊ မြတ်စွာဘုရား ဆွမ်းဘုန်းပေးသည့်နေရာ၊ နေအဉ္စရာမြစ်တွင် ရွှေခွက်မျှောတော်မူသည့်နေရာ၊ မင်းတုန်းမင်းဇရပ် စသည့်နေရာများသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရာဇဂြိုလ်မြို့တွင် ၀ိရွှသျှန္တီစေတီနှင့် ထိုင်ခုံစက်လှေကား၊ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ထိပ်ရှိ မူလဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်နေရာ၊ ပထမ သဂါင်္ယနာတင်တော်မူရာနေရာ၊ ပိပ္ပလိကလှိုဏ်ဂူ၊ ဇာတ်မြင့်ဇာတ်နိမ့် ရေချိုးရာရေပူစမ်းနှင့် ရေချိုးဆိပ်၊ ရှဉ့်နက်များအစာကျွေးသောရေကန်၊ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်ရာ၊ ဗိမ္ဗိသာရမင်း ကြီး၏ဆွမ်းဘဏ္ဍာတိုက်၊ အဇာတသတ်မင်းကြီး၏ ဓာတ်တော်တိုက်၊ ဗိမ္ဗိသာရအကျဉ်းထောင်နေရာ၊ ဇီဝကမ္ဗကကျောင်းတော်ရာနေရာ၊ နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ဟောင်းရှိရာနေရာ စသည့် နေရာများသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ရန် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
ဗာရာဏသီမြို့တွင် မြတ်စွာဘုရား ဓမ္မစင်္ကြာတရားဦးဟောတော်မူခဲ့သည့် မိဂဒါဝုန်တော၊ ဗြဟ္မဒတ်နန်းတော်၊ သမင်ဥယျာဉ်၊ ဂင်္ဂါမြစ် အစရှိသည့်နေရာများသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သာဝတ္ထိ (ယခု နီပေါနိုင်ငံ) လုမ္ဗိနီအင်ကြင်းဥယျာဉ် ရှိ အလောင်းတော်သိဒ္ဓတ္ထဖွားမြင်တော်မူရာနေရာ၊ အလောင်းတော် ခြေ ၇ လှမ်း လှမ်းရာတွင်တည်ထားသော စေတီများ၊ မယ်တော်မာယာရေကန်၊ အသောကမင်းကြီး၏ကျောက်တိုင်၊ နိမိတ်ကြီးလေးပါးအား ပြသသောနေရာ၊ နိဂြောဓါရုံကျောင်း အစရှိသည့်နေရာများသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုသိနာရုံရှိ မဟာပရိနိဗ္ဗာနစေတီတော်၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူရာရုပ်ပွားတော်မြတ်၊ တေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်းရာစေတီတော်၊ စုန္ဒလုလင်မှ မြတ်စွာဘုရားအား ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းသောနေရာ
အစရှိသော နေရာများသို့ စုံလင်စွာဖြင့် သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်စေရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
ထွက်ခွာမည့်ရက် - အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလ များ။
၀န်ဆောင်မှု - ကျွမ်းကျင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်လမ်းညွှန် တို့အပြင် တရားတော်များအား ပိုမို နှလုံးသွင်းနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဖွား၊ ဗုဒ္ဓဂါယာနေ ဆရာတော်မှ လိုက်လံတရားပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘာလီကျွန်းသို့ ချစ်သူနှင့်အတူ ၃ညအိပ် ၄ရက် ခရီးစဉ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းသို့ ၂ ယောက်အတူ သွားရောက်လည်ပတ်ရင်း Honeymoon အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးဖို့ Peace Smile Land မှ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
ဘာလီရဲ့ အလွန်လှပတဲ့ နေ၀င်ချိန်မှာ Uluwatu Temple ကိုနောက်ခံထားရင်း အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြမယ်။
ညနေခင်းမှာ ကမ်းခြေမှာ အတူတူ Romantic ဆန်ဆန် ညစာသုံးဆောင်ကြမယ်။
၂ ယောက်စလုံးအတွက် Spa Treatment လည်း ပါဝင်တာကြောင့် ယခုပဲ စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။
အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်များထုတ်လုပ်ရာ Tohpati ရွာကလေး၊ Luwak Coffee ထုတ်လုပ်သောနေရာ၊ လှပသော Mt. Batur နှင့် Lake Batur၊ လှေကားထစ်စိုက်ခင်းများစိုက်ပျိုးရာ နေရာ၊ Sacred Monkey Forest Scanturary ၊ Tanjung Benoa Watersports Center ၊ Tanah Lot Temple ၊ ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်ရန်အတွက် Kuta Beach Walk Mall အစရှိသည့်နေရာများသို့ သွားရောက် လေ့လာလည်ပတ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ လန်ကာဝီကျွန်းရှိ သဘာဝအလှအပများကိုခံစားရင်း ချစ်သူနှင့်အတူ အမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးကြရအောင်
လန်ကာဝီကျွန်းတွင် အတူတူ လည်ပတ်ရင်း မလေးရှားပါတိတ် စစ်စစ်တွေရနိုင်တဲ့ Atma Alam Batik Art Village သို့ သွားရောက်လေ့လာကြမယ်။
အလွန်မြင့်တဲ့ Sky Bridge ကိုတက်ကြမယ်၊ Cable ကားစီးမယ်။
Atma Alam Batik Art Village, Cenang Street, Eagle Square, Underwater World, Langkawi Sky Bridge, 3D Art Paradise, Island Hopping Tour, Singsar Besar Island, Beras Basah Beach, Pregnant Maiden Fresh Water Lake အစရှိသည့်နေရာများသို့ သွားရောက်အပန်းဖြေ လေ့လာကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာနှင့်အညီရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော သြတြေးလျနိူင်ငံရှိ လှပဆန်းပြားသောသဘာဝအလှတရားများ၊
ခေတ်မှီတိုးတတ်ပြောင်းလဲနေသောနည်းပညာနှင့်တူ ဆန်းသစ်သော Design များကိုကြည့်ရှုခံစားရင်း
အရသာစုံလွင်လှသောစားသောက်ဖွယ်ရာများ သုံးဆောင်၍ တစ်နှစ်တာပင်ပန်းခဲ့သမျှကို လွတ်လပ်စွာအနားယူအပန်းဖြေကြပါစို့
ဘရစ္စဘိန်း (Brisbane) ရောက်ရင် မလည်မဖြစ်နာမည်ကြီးနေရာများ
Queensalnd Cultural Center, South Bank မှတစ်ဆင့် Brosbane River အတွင်းသင်္ဘောစီးနင်းပြီး
၁၉ရာစုနှစ် ရှေးဟောင်းလက်ရာအဆောက်အအုံများဖြစ်သည့် Custom House ကိုကြည့်ရှုပါမည်။
Queen Street Mall, Mt. Coot Tha (ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်), Lone Pine Koala Sanctuary ရှိ ဝတ်ဝံကလေးများ၊
Museum Of Brisbane အစရှိသောနာမည်ကျော်နေရာများကိုကြည့်ရူလေ့လာပါမည်။
ဂိုးလ်ကိုစ်(Gold Coast) ရောက်ရင်
Monive World, Crab Catching Cruise, Sea World, မှ အလှအပရှုခင်းများကိုကြည့်ရူခံစားပါမည်။
Penguin Parade Tour, Churchill Island တွင်သားပိုက်ကောင်နှင့် ကိုလာဝတ်ဝံများ၊ Phillip Island San Remo တံငါရွာနှင့်
ပင်ဂွင်းဌက်များ၊Great Ocean Road,ကမ်ခြေအလှအပများ၊ Twelve Apostles, ပင်လည်မှထိုးထွက်နေသော
Sydney Tower, Opera House, Harbour Bridge, The Rock နှင့် ဘွန်းဒီကန်းခြေ အရှိသော အထင်ကရနေရာများ၊
ကမ္ဘာသမိုင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်သာ ဆစ်ဒနီရှိလှပသောတာင်တန်းပြာမျာ၊ ၂၄၈၀၀၀ ဟတ်တာအကျယ်အဝန်းရှိသော နက်ရှိုင်းသောလျှိုမြောင်းများ၊
မဲလ်ဘွန်းတွင် ဖိလစ်ကျွန်းပေါ်ရှိ သားပိုက်ကောင်လေးများ၊ ပင်ဂွင်းဌက်ကလေးများ ၏ သဘာဝအတိုင်းသွားလာလှုပ်ရှားမှုများကိုကြည့်ရှုပါမည်။
The Twelve Apostles ဟုခေါ်တွင်သော မဲလ်ဘွန်းအနီးရှိ Great Ocean Road ကိုလည်းသွားရောက်လေ့လာကြပြီးနောက် မဲလ်ဘွန်းမြို့တွင်းသို့လည်း
ထွက်ခွာမည့်ရက် - သြဂုတ်လအတွင်း
တည်းခိုရန် ဟိုတယ်များမှာ -3Stars,4Stars (နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနှုန်းဖြင့်)
လေယာဉ်လက်မှတ် - မပါဝင်ပါ။ (ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်သောကြောင့် ရုံးသို့ အသေးစိတ်စုံစမ်းပေးပါရန်။)
အစားအသောက် - မပါဝင်ပါ။ (ဧည့်သည်တော်များမိမိတို့စိတ်တိုင်းကျမှာယူသုံးဆောင်နိုင်ရန် စားသောက်ဆိုင်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။)
နေမ၀င်အင်ပါယာသားတို့ရှိရာမြေသို့ ၅ည ၆ရက် အလည်အပတ်ခရီးစဉ်
တိုကျိုမြို့တွင် အိုရှိကုရပ်တော်မူရုပ်ပွားတော်၊ အဆကုဆရှေးဟောင်းကျောင်းတော်၊
Tokyo Sky Tree၊ နှင့် တိုကျိုမြို့တွင်း လည်ပတ်ပါမည်။ လာဗင်ဒါပန်းခင်းများ၊
တိုကျိုတာဝါ နှင့် ဘုရင့်နန်းတော်သို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။
ဂျပန်ရိုးရာ (နွေရာသီ ကီမိုနိုဝတ်စုံ) အားဝတ်ဆင်ပြီး နာမည်ကြီး ကမာကူရ ဘုရားသို့
ဂျပန်လူမျိုးတစ်ဦးကဲ့သို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ နေ့လည်စာအား ဂျပန်စတိုင် ထမင်းဘူးဖြင့်ဧည့်ခံပါမည်။
သာယာလှပသော Ashiko ရေကန်တွင် ၄၅ မိနစ်ခန့် သင်္ဘောစီးကာ ဖူဂျီ၏အလှကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။
ဖူဂျီတောင် အဆင့်ခုနှစ်အထိတက်ရောက်ပြီးနောက် ဟိုတယ်တွင် Check In ပြုလုပ်ပါမည်။
ဟိုတယ်တွင် သဘာဝရေပူစမ်းအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အိုရှိနိုဟကိုင်း ဂျပန်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်လေ့လာပါမည်။
ဂျပန်ရှိ အကြီးမားဆုံးလူလုပ်ကျွန်းဖြစ်သည့် အိုဒိုင်းဘကျွန်းသို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။
တိုကျိုရှိ လူငယ်များပျော်မွေ့ရာ ရှင်းဂျုကု၊ ဟရဂျုကု၊ ရှိဘုယ ဘူတာနှင့် အခြား Branded ပစ္စည်းများ ရောင်းချရာ
ထွက်ခွာမည့်ရက် - ဂျူလိုင်လ၊ သြဂုတ်လ၊ အောက်တိုဘာလ။
၀န်ဆောင်မှု - ကျွမ်းကျင်သော နိုင်ငံခြားသားဧည့်လမ်းညွှန် မှ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Korea ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းထဲက နေရာတွေမှာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရင်း
ခမ်းနားတဲ့ ဆိုးလ်မြို့ကို မိသားစုနဲ့အတူသွားရောက်လေ့လာကြရအောင်. . . .
ဆိုးလ်မြို့တွင် Seoul Tower၊ မြောင်ဒုန်း Shopping District၊
ဂျောင်ဘွတ်ခ်နန်းတော် နှင့် ကိုရီးယားအမျိုးသားပြတိုက်၊ နာမိကျွန်း
Namsan Tower၊ Namsan Hanok ရှေးဟောင်းအိမ်များ၊
Gingseng Center၊ ဂျင်ဆင်းအရက်နှင့်ဆေးဝါးများရောင်းချရာဆိုင်များ၊
အလှကုန်ဆိုင်များ၊ Gwanghwamun Square နှင့် Cheonggyechon စမ်းချောင်း
ဂျယ်ဂျူကျွန်းတွင် Mysterious Road၊ နဂါးခေါင်းပုံသဏ္ဍန်ကျောက်ဆောင်၊ Sunrise Peak၊
Seongeup Village၊ Jeongbang ရေတံခွန်၊ Jusangjeolli Cliff၊ Play K-POP Museum
ထွက်ခွာမည့်ရက် - အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလ
တည်းခိုရန် ဟိုတယ်များမှာ -3Stars Hotel,4Stars Hotel,5Stars Hotel